Bisha December oo la Bilaabayo Dhismaha Airporka Garowe Iyo Jaamacada Badhan[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Bisha December oo la Bilaabayo Dhismaha Airporka Garowe Iyo Jaamacada Badhan[Sawirro]
Waxaa maanta magaalada sharka ee dalka emaraadka ka dhacay Saxiixii Shirkada ku guulaystay mashruuca dhisitaanka Garoonka diyaaradaha Garowe iyo Jaamacada Maakhir ee Badhan.
Saxiixa ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka Qorshaynta Puntland shire xaaji farax iyo wasiirka Duulista hawada Xasan Xaajis siciid .
Kadib markii shirka furmay ayaa halkaasi waxaa lagaga warbxiyay qandaraaskan iyo dhisida mashaariicdani qaababka kala duwan ee ay Soo mareen iyadoo ay shegeen masuuliyintii goobta joogtay in ay qaadatay sanado maantana lasoo afmeeray .
Waxa ka soo baxay shirkadii u tartamayay dhisida mashaariicda laba shirkadood oo kala Shirkad laga leeyahay Dalka Turkiga iyo mid kale oo laga leeyahay dalka MASAR waxaan lagu kala magacaaba MITAK IYO CEC ooo kala dhisaya labaduba Garoonka Garowe iyo Jamaacada.
Qudbadaha kadiba yaa waxaa halkaasi lagu jiiday qalinka saxiixa dhisida mashaaricda iyadoo labada dhinacba aya kala qaateen waraaqaha iyadoo sidoo kalena ay sheegeen shirkaduhu ina uu socon doono sanad dhisida labada mashruuc.
Waxana sidoo kale lagu dhawaaqay in la bilaabi doono bisha sagaalada kowdeeda.
Isku soo wada duub waxa dhawaan hirgali doona dhismayasha mashaaricda iyadoo ay maalin galinayso dawlada Kuwayt oo iyado balan qaaday mashaaricdani waxaanay ugu deeqday Dawlada puntland.